सर्वाधिक महँगा बलिउड स्टार दीपिका र रणवीरमा को धनी ? - Kendra Khabar
सर्वाधिक महँगा बलिउड स्टार दीपिका र रणवीरमा को धनी ?
२०७५, ३ मंसिर सोमबार ०८:०१
बलिउड सुपर स्टार नायिका दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंह भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । १८ नवभेम्बरमा दीपिका र रणवीर इटालीबाट आफ्‍नो घर मुम्बइ फर्किएका थिए । घरमा उनीहरुका दुवै तर्फका साथीभाइ र आफन्त तथा मिडियाले समेत भव्‍य स्वागत गरेका थिए । बलिउडका चर्चित नायक नायिका रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण महङ्गा कलाकार हुन् । रणवीर एउटा फिल्‍ममा काम गरेको ८ करोड लिन्छन् भने दीपिका भने ९ करोड रुपैया लिन्छिन् ।
विवाहमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएका यि जोडीमा को धनी या को सँग बढी छ बढी पैसा भन्ने एक प्रकारको चर्चा नै चलेको छ अहिले । दीपिका पादुकोण बलिउडकी टप हिरोइनमध्‍ये एक हुन । संजय लीला भन्सालीको फिल्‍म पद्मावतमा उनले १२ करोड रुपैँया पारिश्रमिक लिएका थिए ।
‘पद्मावत’मा दीपिकाको पारिश्रमिक रणवीर र शाहीद कपूरभन्दा धेरै थियो । साथै फोर्ब्सले सन् २०१७ मा सयभित्र बलिउडका धनाढ्‍यको सूचिममा दीपिकाको नाम पनि सार्वजनिक गरेका थिए जसमा दीपिका पादूकोण ११ नम्बरमा परेकी थिइन् । उनको करीब ५९.५ करोड रहेको बताइएको छ । त्‍यही कुरा ब्राण्ड, गोआइबी, लारेल, एक्सिस बैंक, एसियन पेन्ट्स लगायत ब्राण्डमा विज्ञापन मार्फत एक छत्र राज गर्दै आइरहेकी छिन् । यसको लागि दीपिका ५ देखि ७ करोड रुपैँया चार्ज लिने गरेकी छिन् ।
यता, बलिउडमा रणवीर सिंह फोर्ब्सको सन् २०१७ को धनाढ्‍यहरुको सूचीमा १० नम्बरमा छन् । रणवीरको कुल सम्पत्ति ६२.६ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । रणवीर सिंहले पनि टुरिजम, चिङ्ग सिग्रेट, जैक एण्ड जोन्स, रुपा फ्रन्टलाइन लगायतका ब्राण्डसँगको विज्ञापनमा काम गरेर पैसा कमाउने गरेका छन् । तर फोर्ब्सले अहिलेसम्‍म सन् २०१८ को धनी सूचीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसले कमाइको प्रश्‍नमा रणवीर–दीपिका दुवैजना धनाढ्‍यको सूचीमा पर्दछन् । उनीहरु दुवै जनाले आफ्‍नो विवाहमा करीब १७ करोड खर्च गरेका छन् । दीपिकाले विवाहको लागि १५ करोडको लेहेङ्गा मात्रै लगाएकी थिइन् । साथै फुलमालामा ३ करोडको औठी लगाएकी थिइन् । त्‍यतिमात्रै नभएर उनले विवाहमा २० लाखको मंगलसूत्र पहिरिएकी थिइन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण विश्वका थप ९ हजार २२० जनाले ज्यान गुमाए
यस्तो छ २४ घण्टाको मौसमी विवरण